Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » ISpain izakuhlala ishushu ngo-2022
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Kuyakhuthaza kwishishini lezohambo ukubona ukuba ngaphezulu kwesithathu kwikota (78%) yabathengi ngokuqinisekileyo, mhlawumbi okanye ngethemba lokuba bazakuya kwiholide phesheya kolwandle kunyaka ozayo.
I-Brits ebulawa lilanga ifuna ukuthontelana ukubuyela kwi-Med ihlobo elizayo, kunye ne-hotspot yendabuko yaseSpain iphinda ifumane isithsaba sayo njengendawo esisithandayo, ibonisa uphando olukhutshwe namhlanje (ngoMvulo we-1 kaNovemba) yi-WTM yaseLondon.
Isithathu (34%) sabathengi abali-1,000 abavotelwe yiNgxelo yoShishino lwe-WTM bathi "ngokuqinisekileyo" baya kuchitha iholide phesheya kolwandle ngo-2022; phantse ikota (23%) ithe “mhlawumbi” iya kukwenza oko, ngelixa abanye abangama-21% bathi banethemba lokuthatha ikhefu kumazwe aphesheya kulo nyaka uzayo. Abanye abayi-17% bathi baza kukhetha indawo yokuhlala, ngelixa nje i-6% yathi abacwangcisi naluphi na uhlobo lweholide ngo-2022.
Eyona ndawo iphezulu ekhankanyiweyo ngabathengi yayiyiSpain, abanye baqiniseke ngakumbi malunga nokuba yeyiphi indawo yeholide abafuna ukuyindwendwela, becaphula iziqithi zaseSpain ezinjengeLanzarote kunye neMajorca.
Okunye okuphakamileyo kuluhlu lweminqweno yayizezinye iintandokazi zemveli zaseYurophu ezinje ngeFransi, i-Italiya kunye neGrisi, ngelixa bekukho umboniso onamandla we-USA - ebingekho kwimephu yabakhenkethi baseBritane ukusukela oko ubhubhane wabanjwa ngoMatshi ka-2020.
Iziphumo ziyakwamkelwa ziibhodi zabakhenkethi ebezikhuthaza abathengi malunga nezicwangciso zokuhamba zexesha elizayo kulo bhubhani kwaye ngoku zinika ingxelo yamanqanaba abalulekileyo emfuno yepent-up.
Bangaphezu kwezigidi ezili-18 iiBrits ezindwendwele iSpain ngo-2019, ziyenza ibe yeyona ndawo siyithandayo- kodwa ifemu yohlalutyo lokuhamba iForwardKeys ithe amanani ehle ngeepesenti ezingama-40 kweli hlobo ngenxa yezithintelo zokuhamba zeCovid.
Ngeli xesha, abakhenkethi abavela eSweden, eDenmark naseNetherlands besiya eSpain babone ukukhula kumanani angaphambi kobhubhane kunye nokhenketho lwasekhaya luphantse lwabuyela kumanqanaba angaphambi kobhubhane.
I-Ofisi yabakhenkethi baseSpain e-UK ithe "izimisele ukubeka iSpain phambi kwengqondo yeBrits ejonge ukuya kwiholide phesheya" kwaye ithathe ithuba lemfuno yebhotile.
Ukwajonge ukwenza imali ekubhukishweni okunokubakho yiBrand USA, esebenze ngokusondeleyo nabakhenkethi kunye neearhente zokuhamba e-UK ngexesha lo bhubhani.
Ulawulo lweBiden belusebenza kwisicwangciso esiya kufuna phantse zonke iindwendwe zakwamanye amazwe ukuba zibonise ubungqina bokugonya xa izithintelo zokuhamba eziya e-US ekugqibeleni zisusiwe.
I-arhente yophuhliso lwezokhenketho yaseFransi i-Atout France iphinde yajoyina i-European Travel Commission (ETC) ngoSeptemba njengenxalenye yephulo layo lokutsala iindwendwe ezininzi.
I-France ilindele ukuba kwindawo yehlabathi kwiminyaka ezayo, njengoko iza kubamba iNdebe yeHlabathi yomanyano lombhoxo ngo-2023, kunye neMidlalo yeOlimpiki kunye neParalympic eParis ngehlobo lika-2024.
Ibhodi yabakhenkethi yase-Italiyane inethemba lokutsala abantu abaninzi baseBritane, ngakumbi emva kokunyanzeliswa kokuvalelwa kwabo bagonywe ngokupheleleyo abavela eBritane kwapheliswa ekupheleni kuka-Agasti.
Nangona kunjalo, iindawo ezinje ngeVenice zijonge ukubuyela kwakhona ngendlela ezinzileyo kunangaphambili kobhubhane.
Ngeli hlotyeni iVenice yavala iinqanawa ezinkulu zokuhamba ngenqanawa kwaye kuye kwakho iingxelo zokuba isixeko siceba ukuqalisa ukuhlawulisa abakhenkethi ukusuka ehlotyeni lika-2022 ukuya phambili.
IGrisi yayiyeyona ndawo iphinde yafumana eyona nto ingcono kweli hlobo, ngokutsho kwenkampani yohlalutyo lwedatha iCirium, efunde ngeenqwelomoya ezisuka e-UK zisiya kumazwe aseYurophu.
I-Greek National Tourism Organisation iphinde yasungula intsebenziswano ngo-Agasti kunye nomphathi webhajethi iRyanair ukukhuthaza indawo ekuya kuyo.
Besebenzisa isilogeni esithi 'Yonke into oyifunayo yiGreece', amaqabane akhuthaza ikhefu lasehlotyeni kwiziqithi zaseGrisi ukuya kwiimarike zase-UK, eJamani nase-Itali.
I-WTM London iqhubeka kwiintsuku ezintathu ezizayo (ngoMvulo woku-1 - ngoLwesithathu we-3 kaNovemba) e-ExCeL - eLondon.
USimon Press, i-WTM London, uMlawuli weMiboniso, uthe: "Kuyakhuthaza kwishishini lokuhamba ukubona ukuba ngaphezu kwekota yesithathu (78%) yabathengi ngokuqinisekileyo, mhlawumbi okanye ngethemba lokuya phesheya kolwandle kunyaka ozayo.
“IBrits ngoku sele ijongene neminyaka emibini yesiphithiphithi sokuhamba, iiholide zaphesheya zingekho semthethweni ngexesha lezinye iindawo zobhubhane, ngoko ke ukuhlala kuye kwanda ekuthandeni.
“Naxa uhambo lokuyonwaba lwaphesheya luvunyelwe kwakhona, siye saxakwa ziimfuno zovavanyo lwe-PCR ezibizayo, imithetho yokuvalelwa, utshintsho lwesaziso esifutshane kwimigaqo kunye nenkqubo edidayo yokukhanya kwezithuthi – singasathethi ke ngentaphane yemithetho kwiindawo ekusiwa kuzo iiholide phesheya.
"Kubonisa ukomelela okumangalisayo kunye nokuzimisela komenzi weeholide wase-UK ukuba uninzi luhlala lunomdla wokubhukisha iholide yaphesheya ngo-2022 - kunye nemozulu enelanga ebonakala ngathi iyahenda ngakumbi emva kwelinye ihlobo lase-UK."